रौतहटमा १५ बर्षे किशोरीको पेटमा ४ महिनाको ग’र्भ देखिएपछि खुल्यो चकित हुने र’हस्य ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/रौतहटमा १५ बर्षे किशोरीको पेटमा ४ महिनाको ग’र्भ देखिएपछि खुल्यो चकित हुने र’हस्य !
काठमाडौं। रौतहट जिल्लाको फतुवा विजयपुर–४ मा पन्ध्र वर्षीया किशोरीलाई भिटामिनको इन्जेक्सन लगाउन भनेर बोलाइ क;र’णी ग’रेको खुलेको छ । त्यहिँ बस्ने ५२ वर्षीय टेकबहादुर चौधरीले गाउँकै किशोरीलाई क;र’णी ग’रेको आ’रोपमा प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ । घ’टना तीन महिना पहिलेको भए पनि पी’डित चार महिनाको ग’र्भवती भएपछि बल्ल सार्वजनिक भएको हो । गरिब परिवारकी किशोरीले ड’रका कारण घ’टना लु’काउन बा’ध्य भएकि थिइन्। चौधरीले आफूलाई डाक्टर भन्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । चौधरी चिकित्सक होइनन् । उनी छोराले सञ्चालन गरेको क्लिनिकमा बस्ने गर्थे ।
त्यही बसेपछि उनले औषधिको नाम र आफूलाई डाक्टर भन्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ। चौधरीले पटकपटक भिटामिन सुई लगाउने भन्दै क;र’णी ग’रेको अनुसन्धान पछि पाइयो ।कर;णी’पछि किशोरीले ड’रले कसैलाई भन्ने आँट गरिनन् । तर उनको पेटमा ग’र्भ बसेको रहेछ । समय बित्दै गएपछि गाउँलेले किशोरीको पेट ठूलो भएको देखे । यसबारे आमाले गाइँगुइँ थाहा पाएर दुई दिनअघि छोरीलाई सोधेकी थिइन् ।
छोरीको कुरा सुनेपछि आमा सिधै चौधरीको क्लिनिक पुगेर छोरीमाथि क;र’णी ग’रेको भन्दै क’राइन् । चौधरीले कतै नभन्नु भनेर ‘ड’र देखाउँदै ग’र्भ झ’र्ने औ’षधि खान दिए । गाउँमा हल्ला चलेपछि पनि साहले चौधरी र पी’डित किशोरीलाई बोलाएर सोधपुछ गरे । चौधरीले आफूमाथि पट’कप’टक क;र’णी गरेको प्रहरी समक्ष बयान दिइन् । किशोरीकी आमाले तत्कालै प्रहरीमा कि’टानी जा’हेरी दिएपछि चौधरीलाई प’क्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको हो।